XCDUM မှအရာရှိများအား TCDD သို့ပေးခဲ့သည် RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီXCDUM အရာရှိများအား TCDD သို့ပေးခဲ့သည်
XCDUM အရာရှိများအား TCDD သို့ပေးခဲ့သည်
25 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ဂျော့ဘ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ
tcdd bunyesi အရာရှိ ၀ န်ထမ်းကိုပေးခဲ့သည်
22 အရာရှိဝန်ထမ်းများအား TCDD သို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။ တရားဝင်ပြန်တမ်းဖြစ်သော TCDD'ye 22 ၏အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများမှထုတ်ဝေသောသတင်းအချက်အလက်ကြောင့်ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းမှအရာရှိအချို့ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
6 နိုဝင်ဘာ 2019 တွင်ထုတ်ဝေသောတရားဝင်ပြန်တမ်းတွင် ၀ န်ထမ်းသစ်များစုဆောင်းခြင်းနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအားဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်ရှိရာပြည်နယ်ရထားလမ်းတူရကီအတွက် 22 အရပ်ဘက်အစေခံကျွန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ TCDD ကိုအချို့သောသင်တန်းများအပြင်အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများအားပေးခဲ့သည်။
တရား ၀ င်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ဘာသာပြန်သူများ၊ အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ၊ ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်မြို့စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများအားသင်တန်းပေးထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ဤသင်တန်းများသည်ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအတွက်ဖြစ်ပြီးပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်မည်သည့်သင်တန်းကိုမျှပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ TCDD ပြည်နယ်အဖှဲ့အစညျး၌ဖျက်သိမ်းသင်တန်းသားများကိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Cancel Staff ဆိုတာဘာလဲ။
TCDD ပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကေဒါအချို့ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတရားဝင်သတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်အရာရှိများ၊ သေတ္တာရုံးအရာရှိများ၊ ဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေးရေးအရာရှိများ၊ သူနာပြုများနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းပညာရှင်များ၏ရာထူးများကိုလည်းဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ilan365)
၁၄ မသန်စွမ်းသူများနှင့် TCDD Tarihi လက်အောက်တွင်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခံထားရသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄ ဦး ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်
Turner အတော်လေးမှ TCDD ရဲ့အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့
တက္ကသိုလ် Beykoz ၏ပညာရေးဆိုင်ရာန်ထမ်းများအားကြီးထွားလာ
TCDD, အဖွဲ့အစည်းများဖုံးလွှမ်းဘူတာရုံခြံမှတဆင့်ရွေ့လျားအရာရှိ။ ခန့်ထားမည်
TCDD, '' အရာရှိတဦးကအရေးယူဘို့အစီအမံယူ
TCDD ဝန်ထမ်းရေးရာန်ထမ်းဦးစီးမှူးTüdemaşအလုပ်သမားရေးရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး 2012
Sığırcıအတွက်တီထွင်မှုများနှင့် TCDD န်ထမ်းတွေနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ဥက္ကဋ္ဌKuşcenneti
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt Veys သွားရောက်လည်ပတ်ရာမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen TCDD 2017 ဟာကော်ပိုရိတ်စီမံခန့်ခွဲမှု့ဆောင်အစည်းအဝေး၏ပထမဦးစွာတစ်နှစ်တာ Make
Arslan, ဧဝံဂေလိတရားကိုဝန်ကြီး! TCDD 700 အရာရှိတစ်ဦးဝယ်ယူ Make ပါ!
TCDD နှင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို၏ KGM စုဆောင်းမှု?
အရာရှိ်ထမ်းခေါ်ယူမှုသတိပြုပါထုတ်ဝေခံရဖို့တဲ့အခါမှာ TCDD နှင့် KGM 1340?
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအနေဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen İsa Apaydın'' သို့အလည်တစ်ခေါက်
Istanbul Metropolitan Municipality Yenikapi Ataturk လေဆိပ် Light Metro လိုင်းတင်ဒါပြန်လည်ဖွင့်လှစ်
Sultanbeyli Çekmeköyမြေအောက်ရထားများအတွက် Deutsche Bank မှ 110 သန်းယူရိုချေးငွေ